» के कारणले हुन्छ भक्भकाउने समस्या ?
के कारणले हुन्छ भक्भकाउने समस्या ?
२०७५ चैत्र २३,शनिबार १२:५७
बोल्दा अक्मकिने, शब्द सही उच्चारण गर्न नसक्ने वा रोकिइ रोकिइ बोल्ने बानीलाई भक्भकाउनु भनिन्छ । यो समस्या कतिपयमा उमेरको वृद्धिसंगै समाधान हुन्छ भने कतिपयमा जीवनभर रहिरहन्छ । वयस्क उमेरमा पनि भकभकाउने मानिसहरु कतिपय अवस्थामा हाँसो मजाकका पात्र पनि बन्छन् ।
कहिलेकाँही सामान्य मानिसहरु पनि तनाव, घबराहट, डिप्रेसन, आवेगलगायतका कारण भकभकाउँछन् । तर, त्यो क्षणिकमात्र हुन्छ, त्यो कुनै समस्या होइन।
के हुन्छ भकभकाउँदारु
यस्तो समस्या भएका व्यक्तिले बोल्ने क्रममा पहिलो शब्द उच्चारण गर्दा नै कठिनाई महसुस गर्छन् । जिब्रो मुखतिर धकेलिन्छ र मुखको मांसपेशीमा स्वतः संकोच आउछ जसका कारण बोल्नका लागि झट्का लगाउनुपर्ने हुन्छ । यो यस्तो मानसिक कुण्ठाको रोग हो, जसलाई कि त स्वयम् पीडितले सम्झन्छ, कि चिकित्सकले । भकभकाउने समस्याका कारण मानिसको स्वभाविकमा असर गर्छ । यद्यपि उनीहरु मानसिक रुपमा भने सक्षम नै हुन्छन्।
वंशाणुगत कारणले पनि भक्भकाउने हुन सक्छ
भक्भकाउने नक्कल गर्दागर्दै बानी पर्न सक्छ
चाँडो चाँडो बोल्ने बानी
तनाव या घबराहटको स्थिति
सामान्य भकभकाउने बानीलाई नियमित अभ्यास वा प्रशिक्षणद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ । तर, मानिस पूर्ण रुपमा बोल्न नसक्ने गरी या कुण्ठित हुने गरी समस्या बढ्दै गयो भने चिकित्सकको सहायता लिनुपर्छ, यसका लागि स्पीच थेरापी गराउने थुप्रै संस्थाहरु छन् । थेरापी गर्दा कति समय लाग्छ भन्ने कुरा बिरामीको अभ्यासमा भर पर्छ । यसमा बिरामीको बाबुआमाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
बिस्तारै बोल्ने अभ्यास गर्ने
शब्द उच्चारणमा ध्यान दिने, किनकि शब्द नै बोलीको मुख्य आधार हो
भक्भकाए पनि बोलिरहने तथा पढ्ने अभ्यास गर्ने
बच्चा या वयस्कलाई अनावश्यक विचार मनमा आउन नदिने
भक्भकाउने मानिसलाई हँसीमजाकको मात्र बनाउने प्रवृत्ति छ, त्यसो गर्नुहुँदैंन, बरु उसलाई प्रेम,स्नेह दिनुपर्छ । शरीरमा पौष्टिक पदार्थको कमीका कारण पनि बच्चाहरु भक्भकाउने गर्छन्।